हाेसियार गल्लि-गल्लीमा भेटिन थाले नेपाली नक्कली नाेट, बैकहरु हैरान !::Digital News Paper
हाेसियार गल्लि-गल्लीमा भेटिन थाले नेपाली नक्कली नाेट, बैकहरु हैरान !
प्रकाशित मिति :शुक्रबार, माघ २५, २०७५ Friday, February 8th, 2019
कास्की – नेपालमा फेरि नक्कली नोटको बिगबिगी देखिएको छ । पोखरामा नक्कली नोट भेटिएको हो । एउटै नम्बरका नोट दैनिक रुपमा देखिन थालेको बैंकहरुले जनाएका छन् । लुम्बिनी विकास बैंकको पोखरा न्युरोड शाखामा एक हप्ताभित्रै पाँचवटा नक्कली नोट आएको बताएको छ । ‘नक्कली नोटको कारोबार पछिल्लो समय अलि बढेको देखिन्छ,’ शाखाकी अप्रेसन इन्चार्ज सफिना जोशीले भनिन्, ‘अहिले आएर दैनिक आउन थालेको छ ।’
उनले पछिल्लो हप्तामा मात्रै २ वटा एक हजारको नोट एउटै नम्बरको आएको जानकारी गराइन् । नक्कली नोट दैनिक जसो आउने भएपनि एकै पटक ठूलो मात्रामा भने नआएको जोशीको भनाइ छ । उनले भनिन् ‘एकैचोटी ठूलो मात्रामा नक्कली नोट भने हामी कहाँ आएका छैनन् । तर, दिनहुँ आइरहन्छन्,’ ।
सेवाग्राहीले ल्याएको नोट ‘फेक नोट डिटेक्टर’मा परीक्षण गर्दा नक्कली नोट भेटिने गरेको उनको दावी छ । नक्कली नोटमा प्राय एउटै नम्बर हुने गरेको एनआरबी संकेत पनि नहुने उनले जनाइन् । पछिल्लो समय पोखरामा नक्कली नोट देखिन थालेकाले कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सजग रहन आग्रह गरिसकेको बैंकले जानकारी दिएको छ । पोखरामा पछिल्लो साउन यतामात्रै २ सय वटा नक्कली नोट भेटिएको नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराले जनाएको छ । ‘एकैचोटी ठूलो गिरोह फेला परेको छैन तर फाटफुट फेला परिरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक पोमनाथ गौतमले भने । नक्कली नोट सक्कली नोटको तुलनामा हल्का हुने र कागजमा पानी राख्दा फुल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।